Ahoana no To Ankafizo Holland Tulip Season | Save A Train
Home > Travel Europe > Ahoana no To Ankafizo Holland Tulip Season
(Last Nohavaozina: 27/12/2019)
Mba hiaina ny Holland Tulip Vanim-potoanan'ny fiarandalamby tokoa eo amin'ny tsy maintsy tena fanajana fahavaratra dia lavitra ny kalandrie. Mandritra ny iray volana eo ho isan-taona, ny sahan'ny faritanin'i Flevoland novaina ho ranomasina tsara tarehy sy midadasika misy voninkazo maro loko mihoatra ny 7 tapitrisa ireo voninkazo. Avy amin'ny Hague sy Leyde any atsimo, niakatra ho any amin'ny Alkmaar ao ny avaratra kosa dia ianao izay miaina tsara tarehy io fahitana. Raha ampifandraisin'ny olona matetika nandeha ny Arbota-Holland bisikileta, fa ny tsy sahisahy lavitra hanintona kokoa fomba hiaina izay mety ho voninahiny tulip vanim-potoana dia amin'ny alalan'ny fiaran-dalamby! Ireto misy toro-hevitra ambony sasany hankafizanao ny vanim-potoana Tulip Holland amin'ny alàlan'ny dia an-dalamby.
Drafitra ny Visit ho an'ny ho avy Holland Tulip Season
Tulip vanim-potoana mihazakazaka avy any amin'ny faran'ny March hatramin'ny tapaky ny volana Mey, fa ny fotoana tsara indrindra mba mahita ny tulips manontolo dia mamelana antenatenan'ny Aprily. Ilainao ny hijery ny toetrandro fa ny fotoana sy hanao ny fikarohana alohan'ny famandrihana mba hahazoana antoka anao hahazo ny tsara indrindra ny fotoana.
Hanover ho The Hague Lamasinina
Hamburg ho The Hague Lamasinina
Berlin ho The Hague Lamasinina
Cologne any The Hague Lamasinina
Ny fotoana tsara indrindra hitsidihana ireo zaridaina sy saha mandritra ny vanim-potoana Holland Tulip
Holland Tulip vanim-potoana manintona be dia be mpizaha tany ary ny mpitsidika ary ny tsara indrindra fotoana mba hitsidika ny tanimboly sy saha tulip matetika rehefa hanokatra sy ora vitsy alohan'ny hanakatona. Drafitra ny diany araka mba ho indrindra avy ny traikefa ary afaka mahazo sary lehibe sasany tsy ny vahoaka.
Bruxelles ho Maastricht Lamasinina
Antwerp ho Maastricht Lamasinina
Cologne ho Maastricht Lamasinina
Berlin ny Maastricht Lamasinina
Boky ny Tickets alohan'ny
Noho ny isan'ny olona tonga mba hijery ny tulips, miaina Holland tulip vanim-potoana lamasinina fa be atao dia afaka ny ho. ny zava-dehibe ny drafitra mialoha sy ny Bokin'i ny fiaran-dalamby tapakila talohan'ny-tanana na aiza na aiza azo atao mba hahazoana antoka ianao tratry ny ananany eo sy hankafy ny nahavariana hevitra.
Tsidiho i Flevoland ho an'ny traikefa mangina amin'ny vanim-potoana Holland Tulip
Raha mitady toerana amin'ny vitsy vitsy tulips fa miaraka amin'ny vahoaka sy amin'ny kely mora kokoa ny vidiny avy eo dia ho anao Flevoland. Azonao atao ny misambotra ny nampiofana eto avy any Amsterdam ary raha hisambotra ihany izy rehefa ora tampon'isan'ny ianao ho afaka hitondra bisikileta eo amin'ny fiaran-dalamby, izay midika hoe vitanao bisikileta manodidina ny tulip saha. Ny hevitra teny an-dalana dia tsy mampino ary maro ireo lehibe sary fahafahana.
Munich ny Utrecht Lamasinina
Cologne any Utrecht Lamasinina
Frankfurt ho Utrecht Lamasinina
Tsidiho ny Leiden na Haarlem
Azonao atao ny misambotra ny fiaran-dalamby ho Leyde na Haarlem izay hahazo ny fomba fijery miavaka malaza "Flower Strip" ary dia ho afaka ny handeha anivon'ireo ny andalana tulips indray mandeha tonga any ianao. izany no tena tsara ho an'ny andro fitsangatsanganana sady toy ny be mpizaha tany malaza toerana halehany.
Fikarohana Holland lamasinina dia mahagaga traikefa ary na dia mihoatra noho izany mandritra ny vanim-potoana tulip. Azo atao ny boky levitra fitehenan-tanana sy ny Train Tours manerana ny firenena fa izy ireto no lafo kely kokoa, ary mety hamela anao amin'ny kely kokoa ny fotoana mba hijery ny tulip saha. An fikambanana dia manan-danja nandritra io fotoana be atao mba ho azo antoka ny drafitra mialoha mba ho indrindra amin'ny vanim-potoana tulip in Holland!
Bruxelles ho Haarlem Lamasinina
Antwerp ho Haarlem Lamasinina
Berlin ny Leyde Lamasinina
Paris ho Leyde Lamasinina
Ankafizo ny fiaran-dalamby nankany, ny alalan 'ny tena azo antoka ny toerana au livre ny saran-dalana, Save A Train Raha toa ka mila hafa Eoropa fiaran-dalamby tapakila, fotsiny tsindrio eto, mankanesa ao amin'ny tranokalanay ary mankafy ny dia.
No tianao mba hiraketana ny lahatsoratra bilaogy teo amin'ny toerana, dia tsindrio eto: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Fholland-tulip-season-by-train%2F%3Flang%3Dmg - (Ampidino nidina hamangy ny Embed Code)
Raha te-ho tsara fanahy ny mpampiasa, dia afaka hitarika azy ireo mivantana an-pikarohana pejy. Eo ity rohy ity, dia hahita ny làlana malaza indrindra fiaran-dalamby – https://www.saveatrain.com/routes_sitemap.xml. Inside manana ny rohy ho an'ny teny Anglisy fipetrahana pejy, fa isika ihany koa dia manana https://www.saveatrain.com/es_routes_sitemap.xml ary afaka hanova ny / en mba / andehilahy na / fiteny azy sy ny maro hafa.